सरकार कोरोनाबाट हामी नेपालीलाई मर्न नदेऊ
‘क’ बाट कछुवा ‘ख’ खरायो, खरायोको सिङ छैन कता हरायो ? ‘क’बाट कोरोना आयो ‘ख’ बाट खै मेरो सरकार कता हरायो ? अबको पछिल्लो चरणको पढाई बच्चा बच्चीहरुले यसरी त, कतै पढ्ने छैनन् ? पढ्ने छैनन भनेर खै चिन्ता पनि कसरी गर्नु के त्यो पढाई पढ्न पाउने हो या पढाउन पाउने हो केहि थाहा छैन।
मेरो सरकारको आभाष नै छैन प्रसङ्ग (कोभिड-१९) को बारेमा सरकारको जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन नदेख्दा। युरोपका झण्डै ७० प्रतिशत बासिन्दा कोभिड १९ को संक्रमणमा फस्न सक्छन्।
ति अति सम्पन्न मुलुकहरुको अवस्था यस्तो छ, भने हाम्रो जस्तो पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच नभएको मुलुकको अवस्था झन कति जटिल बन्ला ? यसैबिचमा केहिदिन अगाडि माननिय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको त्यो अभिव्यक्तिले झन जनताको आत्मबलमा पेचिलो प्रहार भएको छ कि ? खै मेरो सरकार कता हरायो ? मेरो सरकार मेरो लागि सरकार हैन सरकार त छ र मेरो लागि भन्ने तर्क मष्तिस्कमा कोरोना जति त्रासले फैलन थालि सक्यो।
लगभग साढे दुई महिना भयो,(कोभिड-१९) को संक्रमण अहिले लगभग त्यो रोग संक्रमणबाट मुक्त हुन थालिसक्यो। चीन सरकारले यो रोगसँग लड्ने जस्तो नैतिक जनप्रेरित साहस र नीति अँगाल्यो यो अवस्थाले सबैलाई चकित पारेको छ। चिनियाँ सरकारले आफनो नागरिकप्रतिको राज्यको नागरिक उत्तरदायित्व कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा ऐतिहासिक प्रमाण पनि दिइरहेको छ। तर, मेरो प्यारो देश नेपालको अवस्था राजनीतिक खिचातानी र जनप्रेरित राज्यको दायित्व नदेखी लाचारिता देख्दा दु:ख लाग्छ।
देशकै कार्यकारी प्रमूख नै बिरामी हुनु भएको छ। फेरि त्यही देशका जिम्मेवार मन्त्री नै नागरिक समक्ष सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न जनतामा उर्दी जारी गर्छन्। मेरो सरकार खै, कता हरायो? म त देख्दिन! यहि हो, मेरो सरकार अनि सरकारको जनताप्रतिको दायित्व?
जबसम्म नागरिकको मनोभावना र राज्यको स्वार्थरहित सम्बन्ध र आकांक्षालाई अवमूल्यन गरिन्छ। तबसम्म राज्य र नागरिक बिचकाे सम्बन्धमा कसरी मिठासको आभास हुन सक्छ। वर्तमान दुईतिहाइको सरकार भएको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्ति, बढ्दो कालोबजारी, महङ्गीका बिच सरकारकाे जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेदारीबाेध कहाँ छ?
अत्यावश्यक हरेक कुराहरु तयारी अवस्थामा राखि सक्नु पर्ने थियो। चाहे अस्पतालहोस् वा त उपचारार्थ चाहिने सम्पूर्ण सरसामाग्री। साथै अत्यावश्यक बाहेक अन्य वस्तुको आपूर्ति र पर्यटक आगमन विभिन्न सीमामा रोक लगाइसक्नु पथ्र्यो। जनताको ज्यानभन्दा ठूलो अरु केहि छ र ? अहिले यो सरकारले नसोचे कहिले सोच्ने ? हामीले कहिले सरकार छ भन्नी अनुभूति गर्ने ? वर्तमान समय हो सरकार उठौं हामी पनि साथमा छौं। जनतालाई सरकार र सरकारलाई जनता चाहिएको समय हो सरकार अहिले, नत्र ख बाट खरायो खै मेरो सरकार कता हरायो भन्नेदिन नआउला भन्न सकिन्न। सरकार खुट्टा र हात नकमाई यसविरुद्ध लड्न जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्, साथमा निर्देशिका पालना गर्ने हामी छौं।
रोगलाई छिर्न नदिऔं पहिला देशको खुल्ला सीमनाहरु बन्द गरियोस्, कालोबजारीविरुद्ध सरकार उत्रियोस्, खाद्ययन्नहरुको सहज बजारीकरण गरियोस्। सरकार छ भन्ने आभाष दिलाइयोस्। विश्व स्वास्थ्य संठनले समेत माहामारीका रुपमा स्वीकार गरिसकेको कोरोना भाइरसबाट हामी नेपाली नागरिकलाई मर्न नदेउ। नत्र बाँचेका भोलिका सन्ततिले धिकारने छन्। हराएको त्यो सरकार भन्ने छन्!